Ndi Australian Shepherd Blue Heeler mix di nma maka gi? - Reeddịrị
Kedu ihe ị ga-enweta mgbe ị gafere abụọ ụdị ewu ewu na-ewu ewu? Tọn ike na ọgụgụ isi na-enweghị atụ, nke ahụ bụ ihe!
Na Australian Shepherd Blue Heeler mix aga site na ọtụtụ aha: Australian Blue Heeler, Texas Heeler, Australian Heeler, na Queensland Heeler Australian Shepherd mix , ịkpọ aha ole na ole.
Nọgide na-agụ maka ozi niile ị chọrọ ịma gbasara ngwakọ a dị egwu!
Kedu ụdị anụ ọhịa abụọ na-eme Texas Heeler?
Kedu ihe Texas Heeler dị ka ya?
Okpu: Texas Heeler ọ bụ ezigbo nkịta ezinụlọ?
Na-elekọta gị Aussie Shepherd Blue Heeler mix
Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler?
Texaschọta ụmụ nkịta Texas Heeler maka ọrịre
’Ll ga-ahụ ngwakọta ndị a na-azụ anụ ndị ọzọ n'anya
Ndi Australian Shepherd Blue Heeler agwakọtara na ngwugwu gị?
Mepere na Texas na 1970s, Texas Heelers bụ bred na-arụ ọrụ ụbọchị niile, kwa ụbọchị. Ọ bụghị ihe ijuanya na a na-ahụkarị obe a na-agbazinye ego maka ndị na-azụ ehi.
Dị ka ngwakọ, Aussie Shepherd Blue Tick Heeler mix adịghị amata site na American Kennel Club (AKC). Na Nkịta Nkịta nke America (DRA) na American Canine ngwakọ Club (ACHC) ma na-amata ụdị ìgwè ahụ.
Iji ghọta nke ọma ihe na - eme ụdị ngwakọ a, anyị kwesịrị ịmata ụdị nne na nna ya. Ka anyị lelee Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia na Nkịta Ọhịa Australia anya n'ụzọ miri emi karị.
Mara Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia
Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia , ma ọ bụ Uchechukwu , na- a maara ha nke ọma maka ikike ịzụ atụrụ ha pụtara ìhè . Mgbọrọgwụ ha gbasapụrụ ruo n'Ugwu Pyrenees nke Europe, bụ́ ebe ndị nna nna ha ochie jere ozi dị ka ndị ọzụzụ atụrụ.
Ka ọ na-erule 1800s, ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia nke oge a mere aha maka onwe ha (n'ụzọ nkịtị!) Oké Osimiri Australia.
N'oge na-adịghị anya, e webatara canines ndị a na United States. Ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ na American West weghaara ụdị ìgwè a na-arụsi ọrụ ike, ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Ka ga-ahụ ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Australia na-arụ ọrụ ugbo ala America. Ha egwuregwu na ịgba ọsọ na-eme ka ha bụrụ ndị mara mma maka ịdị gara gara na irube isi .
Zute Nkịta Ọhịa Australia, AKA Blue Heeler
Ekwela ka Nickn na-emegharị gị. Na Nkịta Ọhịa Australia na Blue Heeler bụ otu ụdị ahụ! Nwekwara ike ịnụ canine a ka a Queensland Heeler ma ọ bụ Onye Australia .
A na-emegharị nkịta ndị Australian Cattle, dị ka Aussie Shepherd na Land Down Under. Ebe a, ha nwetara aha ọma maka nraranye na ntachi obi ha .
N'adịghị ka onye ha na canine, Otú ọ dị, osisi ezinụlọ Blue Heeler nwere alaka ụlọ ọrụ ole na ole.
Blue Heelers bụ ụmụ nke Smithfield , ndị Britain na-azụ anụ ụlọ batara Australia.
Mgbe Smithfields gbalịsiri ike ime mgbanwe maka ọnọdụ ọjọọ, ha na ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ nwere njikọ, dịka Egwuregwu ndị dị na Scottish Highland na Ihe anakpo Dingo .
Ma ihe okike akwụsịghị ebe a! Ndị Dalmatian na Kelpies ka emesịrị tụba ha n'ime ngwakọta ahụ, na-enye anyị Nkịta Ehi Australia taa.
Dị ka ị nwere ike ịkọworị, ọdịdị nke Australian Blue Heeler abụghị nke tozuru etozu.
Zute Ozzy na Phinea, ndị Texas Heelers - Isi ihe onyonyo
Ọ bụ ihe anaghị adị mma ịchọta Texas Heelers nke yiri otu, ọbụnadị site n'otu ahịhịa!
Ha na-etu ọnụ mgbe mgbe na Australian Cattle Dog’s muscular etiti na perked elu ma ọ bụ flopped ala ntị na nwa imi.
Anya ha dị okirikiri nwere ike ịnwe acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị aja aja, ma ọ bụ agwakọta ha abụọ.
Fọdụ nwere ike nwere otu anya anya dị iche na nke ọzọ dịka Aussies nwere ike inwe heterochromia .
Blue Heeler Australian Shepherd mixes bụ na-ejikarị bobtail amụ ya , ma ha nwere ike ịnwe ọdụ dị ogologo.
You maara na nkịta ndị nwere ọdụ bobbed bụ ihe ịrịba ama nke ihe nketa ha dị ka ụdị arụ ọrụ ?
A na-ewere ya na ọ bụ ọrụ dịịrị ya mgbe ha nwere ọdụ zuru oke mgbe ha na-azụ ìgwè buru ibu, yabụ ọtụtụ ụdị anụrụ ghọrọ obere ọdụ.
Kedu otu nnukwu onye Ọzụzụ Atụrụ Australia nke Blue Heeler ga-esi buru ibu?
Guzo 17 ruo 22 sentimita asatọ (43 ka 56 cm) na-erikpu 45 ruo 55 pound (20 ka 25 n'arọ) mgbe etolitere, Australian Blue Heeler bụ nha zuru oke maka ịchịkọta anụ ụlọ.
Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị Texas Heelers nwere ike pere mpe ntakịrị, ọ dịkarịghị oke ọdịiche dị n'etiti ndị nwoke na nwanyị abụọ.
Texas Heelers nwere a Miniature Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia nne na nna, ma, na-enwe obi uto.
N’agbanyeghi na ha pere mpe ma ọ bụ ọkara, ndị na-agwakọta Cattle Dog Australian Shepherd mix chọrọ ohere zuru ezu iji gbaa ọsọ. Nnukwu ogige ahụ, nke ka mma!
Mana anyị na-akwado ịtụle akụkọ ntolite ha, yabụ ha kwesiri ibi n'ime ime obodo, dika ebe anumanu na ugbo .
Uwe mkpuchi na agba nke Blue Heeler Australian Shepherd mix
Ha na-enwekarị mkpụmkpụ-ọkara ogologo ogologo mkpuchi abụọ - akwa mkpuchi ihu igwe na akwa mkpuchi.
Fọdụ obe Ọstrelia Ọzụzụ Atụrụ-Cattle Dog nwere ntutu kwụ ọtọ ma ọ bụ nke nwere ntutu dị larịị, mana ndị ọzọ nwere ajị anụ na-adịkarị nro.
Obe a na-abia na nchikota nke nwa, ọcha, aja aja, acha ọcha, isi awọ, acha anụnụ anụnụ, na ọbara ọbara .
Ha na-egwu egwuregwu na-acha ọcha site n'egedege ihu ha ruo n'olu ha, ihe nkpuchi, ihe nkedo, ntụpọ, na ntụpọ ndị a.
Ngwakọta onye ọzụzụ atụrụ Sheensland Heeler Aussie abụghị maka ndị obi na-adịghị ike. Ọkpụkpụ ọ bụla dị n’ahụ ha raara onwe ya nye ịrụsi ọrụ ike na ịzụ anụ.
Zute Roscoe, ndị Australian Blue Heeler - Isi ihe onyonyo
Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ịtụ anya ike, ọgụgụ isi siri ike. Ọ bụ ya mere ha ji eme ya ezigbo ndị enyi maka ezinụlọ ndị na-ekpori ndụ n’èzí ma na-arụsi ọrụ ike.
Dị ka ndị na-azụ anụ ụlọ, Texas Heelers bụ ndammana na-echebe . Won’t gaghị ahụkarị ka ha na ndị bịara abịa ma ọ bụ anụmanụ na-amaghị ama na-eme enyi ngwa ngwa.
N'ihi nke a, ịkpakọrịta oge niile dị mkpa. Gị Australian Blue Heeler chọrọ ohere oge iji soro ndị ọzọ na nkịta na-emekọrịta ihe.
Ọ bụrụ na anụ ụlọ gị enwetaghị ngosipụta a, omume nche ha nwere ike ịba ụba.
Ozi ọma ahụ bụ na Aussie Shepherd Blue Heeler na-agwakọta anaghị adịkarị ụja na-enweghị ihe kpatara ya . Ha dịkwa ezigbo enyi na ngwugwu ha.
N'etiti ha iguzosi ike n'ihe na ume dị elu , nke a nwere ike inwe obi ụtọ na ezinụlọ dum-ọbụlagodi kiddos!
Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịmara na ebumnuche nke ọzụzụ anụ ụlọ nke Australian Heeler nwere ike ịbụ ngọzi na ọbụbụ ọnụ.
Anyị na-adọ aka na ntị megide iweta nwa pup gburugburu ụmụ anụmanụ pere mpe. Na ọnwụnwa ịchụ na ìgwè ehi dị nnọọ ike.
Ga-achọ ka gị na ụmụntakịrị lekọta oge igwuri egwu maka otu ihe a. Fido nwere ike ihie ha maka atụrụ!
N'ụzọ dị mma, Texas Heelers na-anabata ezigbo nduzi. Ha bu n’obi ime ihe na-atọ ha ụtọ, ha na-amụkwa ngwa ngwa . Ndị nwere ahụmahụ ekwesịghị inwe nsogbu na-eduzi ụdị a ike nke ngwakọ.
Rịba ama otu nna nkịta a si agwakọta a Pịa , na-emeso , na otuto iji kwụghachi nwa akwụkwọ Texas Heeler ụgwọ maka ọrụ ọfụma. Biko wetuo obi ka Maggie dị izu iri na ise n’egosiputa ụzọ aghụghọ ya nke ọma na vidio a!
Ngwakọta gị nke Queensland Heeler Aussie ga-ahụ ọzụzụ ka ị na-atụgharị uche. Ndị nwere onwe ha na ndị maara ihe, nkịta ndị a na-enwe obi ụtọ mgbe ha na-agagharị ma na-arụ ọrụ.
Ugboro ole ka ị kwesịrị ịkwadebe Texas Heeler gị? Ole mmega ahụ ha chọrọ? Azịza ya pụrụ iju gị anya!
Ma ọ dịghị mkpa ka nchegbu. Ha bụ ndị nkịta na-emepụta mmezi dị ntakịrị.
Ugboro ole ka ị kwesịrị ịkwadebe Texas Heeler gị?
Ọ bụrụ na ị na-eche, Australian Shepherd Blue Heeler mixes na-awụfu. Na uwe ha juputara na ịwụfu afọ , pups ndị a dị ka ihe na-abụghị hypoallergenic dị ka nkịta nwere ike nweta.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụdị obe a anaghị achọ mma. Ugboro abụọ na atọ n’izu ụka Nke a na-ezukarị, mana ị nwere ike ihicha ha oge ọ bụla, ọkachasị ma ọ bụrụ na enyi gị aji nwere ntutu dị ogologo.
I nwekwara ike inye onye Australia gị Heeler ntutu ntutu dị mfe iji belata (enweghị ntaramahụhụ) na oge ịmebe ya dum. G DONN DON KA ị kpụọ ha!
You nwere ike ịsa ha ugboro ugboro karịa ngwakọta ndị ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ n'èzí. Chọghị ncha ntutu ha na mmiri ọ bụla, ọ bụ ezie.
Chekwaa suds maka ichoro ala kwa izu isii rue isii n’otu oge . Ka ọ dị ugbu a, dabere na igwe ịsa mmiri iji zute nsị ọ bụla ma ọ bụ apịtị.
Mgbe ị na-adọghe ntị Fido, lelee ha maka ihe ịrịba ama nke mgbakasị ma ọ bụ ọrịa. Jiri akwa dị ọcha hichaa ha ma ọ bụ na-ehichapụ iji wepụ irighiri ihe ọ bụla.
Iji bulie usoro mma gị nke Australian Blue Heeler, kpochapụ ha ezé ugboro abụọ n'izu ma kpocha mbọ ha 1 ka 2 ugboro n'ọnwa .
Kedu ụdị mmega ahụ ndị Australian Heelers chọrọ?
Ọ bụrụ na Texas Heeler nwere ya n'ụzọ ha, ha ga-anọ n'èzí na-agbatị ha na ụkwụ ha site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ. Ọ bụrụ na ọ dị oke egwu, buru ụzọ mee atụmatụ opekempe minit 60 esịm 90 ke usen , ma ọ bụ 14 kilomita kwa izu.
Buru n'uche na nke a bụ zuru oke nke kacha nta maka ngwakọ a. N'ihe banyere mmega ahụ, ọ na-afọ nke nta ka ọ ka mma.
Na-eche ma ị nwere ike ijide? Aussie Blue Heelers adịchaghị mkpa ka ụmụ mmadụ ha nye mmega ahụ ozugbo. Naanị ha chọrọ ka ị nye ohere.
Inye ha ọrụ ha ga-eme bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji nye echiche uche na nke anụ ahụ na-agụ ha agụụ.
Havenweghi anụ ụlọ na-ejegharị n'azụ ụlọ gị? Akụzi gị Aussie Shepherd Blue Heeler mix iji nyere aka na gburugburu ụlọ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ihe a na-anụtụbeghị ịnya nkịta na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ugbo mpaghara.
Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị nhọrọ ebe ị bi, gbanye pup gị n'èzí na nchekwa ma lelee ya ka ọ na-agba ọsọ! Tinye na egwuregwu ụbụrụ na ọzụzụ ọzụzụ iji mee ka ike gwụ ike a.
I nwedịrị ike inye ya a toy nke yiri anụmanụ iji gboo mkpa ya ịchụ.
N'inye ha amamịghe, Queensland Heeler Australian Shepherd mix na-enwe ekele maka ntakịrị ihe ọhụụ n'otu oge. Nwere ike ịgbanwe usoro mgbatị ahụ ha ma nye ha ahụmịhe ọhụụ.
Ndị na-ekpo ọkụ Texas nwere ike ịnagide ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, gụnyere oke okpomọkụ. Kedu ihe nke ahụ pụtara gị? Nhọrọ, enyi m!
Ngwakọ a na-ewere egwuregwu egwuregwu canine dị ka agility, flyball, na rally n'egbughị oge. Enweghị nkịta aggie na-eru gị nso? Bunye ọtụtụ mmiri dị mma, ma were Fido mee njem.
Ndị Australian Heelers bụkwa ndị na-egwu mmiri. Onweghị ihe dịpụrụ adịpụ maka ụdị adịghị mgboro a!
Nri na nri: olee otu kibble buru oke?
Ná nkezi, Aussie Blue Heelers chọrọ Iko 2,5 ruo 3 nri kwa ụbọchị, gbasaa ugboro abụọ na atọ. Ọ bụrụ na nwa gị na-arụ ọrụ karịa ma ọ bụ nwee nnukwu ụlọ, ịnwere ike ịbawanye ego a.
Ndị na - azụ anụ Texas nwere ike iri nri nkịta akwadoro maka ọkara ma ọ bụ nnukwu ụdị. ’Ll ga-achọ ijide n'aka na kibble ha nwere opekempe protein 20% .
Rịba ama na Ngwakọta Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia nwere ike ịbụ ndị na-eri nri. Tụlee ịzụta obere nri ruo mgbe ị ga-ahụ ụdị nri na-edozi ahụ nke ga-adịrị gị uto uto.
A na-amụkarị Australian Blue Heelers nwere ọnọdụ ahụike siri ike. Site na nlekọta kwesịrị ekwesị, ndụ ha nwere ike ịdị ogologo oge 12 ruo 16 afọ !
Nke a apụtaghị na Texas Heelers enweghị ike ịmalite ọnọdụ ahụike, n'agbanyeghị. Ọ bụrụ na enyi canine gị na-azụ ehi mgbe niile, ọ nọ n'ihe ize ndụ ka ukwuu maka ikiaka na hip dysplasia n'ihi akwa na akwa.
Ọnọdụ anya , dị ka Atrophy Retinal Progressive (PRA), Collie Eye Anomaly (CEA), na cataracts, nwere ike ịmalite dị ka nkịta gị dị afọ.
Na mgbakwunye, otu mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-enye Aussie Blue Heeler mkpuchi ha nwere ike ibute ntị chiri . Ọ bụ ezie na nke a abụghị nkwa, ọ ga-ekwe omume, yabụ ọ kachasị mma ịmara ya.
Nsogbu ahụike ndị ọzọ agwakọtara gị bụ Blue Heeler Australian Shepherd nwere ike ịbụ Ọdụdọ distichiasis , osteochondritis dissecans, epilepsy, na Collie imi ma ọ bụ Choputa Lupus Erythematosus (DABERE NA)
Zute Luna, nwa nkịta Texas Heeler - Isi ihe onyonyo
Otutu Australian Shepherd & Blue Heeler mixes na-efu ego $ 800 na elu . Na mgbakwunye na ịbụ nkịta na-adịghị ahụkebe, ịbụ ngwakọ na-achọsi ike maka ọrụ ugbo na mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike iweta ọnụahịa ahụ elu.
Ego ole ị ga-akwụ ụgwọ nwekwara ike imetụta pup na okike, ọdịdị, na agbụrụ nke nne na nna.
Might nwere ike ịdaba n'etiti ịzụ ahịa na onye na-azụ ihe ma ọ bụ na-ewere Texas Heeler. Ka anyị nyochaa nhọrọ abụọ ahụ ka ị nwee ike ịme mkpebi kacha mma.
Australian Shepherd Blue Heeler mix ndị na-eme ihe
Mixeddị agwakọta a bụ ihe ama ama na Texas, mana ị nwere ike ịchọta ụmụ nwoke Texas Heeler na mpụga Lone Star State.
Nwere ike ịga njem, yabụ mee atụmatụ maka ya. Chọghị ịmịcha n'ụlọ gaa leta-na-ekele na pups. Jide n'aka na usoro ịzụ ihe na oge mmefu ego gị.
Ọ bara uru ịjụ ndị na-azụ ihe nwere ike inye ahụ ike di tupu ị banye n'okporo ụzọ. ’Ll ga-achọ akwụkwọ a agbanyeghị, yabụ ị nwere ike jụọ maka ya n'isi.
Ọ bụrụ na onye na-azụ ihe enweghị ike ma ọ bụ na ọ gaghị enye ya, ịnwere ike imegharị mbọ gị gaa ebe amaara aha.
Njikere ibido? Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ atụrụ maka ịlele:
Ehi CrossBow (Jacksonville, FL)
Obodo Texas & Heelers (Seneca, NM)
Nnapụta Aussie-Australian Cattle Dog napụtara
Fọdụ ndị hụrụ nkịta n'anya na-ahọrọ ime ihe karịa ịzụ ahịa. Ọ bụrụ na nke ahụ dị ka gị, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na e nwere ọtụtụ ndị Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia na Nkịta Ọchịchị Australia na-anapụta mba niile!
Mgbe ị na-ahọrọ pooch nnapụta, mesoo usoro ahụ dịka ị ga-azụ site na onye na-azụ ya.
Gaa na nzukọ nnapụta n'onwe gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-anabata nkịta okenye, ị ga-ebu ụzọ zute ha. Kedu ihe ọzọ ị ga - eji mara ma agwa gị ọ na - agba ọsọ?
Jide n'aka na ebe obibi ahụ edozilarị nleta mbụ na ọgwụ mgbochi. Won’tgaghị ama ihe niile gbasara akụkọ ntolite nke nnapụta gị, mana obere nlekọta a na-enye ha ụkwụ-ahụike.
Anyị maara na ị na-echegbu onwe gị ịnye ụlọ Blue Heeler nke Australia ụlọ ha ruo mgbe ebighi ebi, yabụ anyị achịkọtara ndepụta nke nzọpụta a iji nyere gị aka:
Nnapụta Nkịta Ehi Texas (Fort Worth, TX)
Ctù Na-ahụ Maka Nkịta Ọhịa Australia (Ogige Obodo, NY)
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia (Rancho Cucamonga, CA)
HeRD nke WY, Inc. (Sheridan, WY)
Kwuo okwu! St. Louis (Troy, IL)
Site na ọtụtụ ụdị ndị mmebe mara mma nọ ebe ahụ, ọ nwere ike isi ike ịhọrọ. Ọ bụrụ na i mebeghị mkpebi, lee ọbụna ụdị ndị ọzọ a ga-atụle.
Ngwakọta ụlọ ọzụzụ atụrụ nke Australia na-agwakọta
Izute Honey, ndị Ọzụzụ Atụrụ Ọzụzụ Ahịa Australia - Isi ihe onyonyo
Ndị amụrụ ụlọ dị mma maka ezinụlọ dị iche iche. Na ijikọta Labrador Retriever’s enyi na Aussie na-aga-getter àgwà, a ngwakọ bụ Ntụziaka maka fun!
Ngwakọta ngwongwo Australian Shepherd Poodle
Mee onye Ọzụzụ Atụrụ Ọzụzụ Ahịa Australia
Mmetuta na Pita ntutu? Na Aussiedoodle nwere ike ịbụ naanị ihe ị chọrọ! Na Poodle si mkpụrụ ndụ ihe nketa hypoallergenic, Aussiedoodles bụ nnukwu ụzọ ọzọ dị ala. Nwedịrị ike ịnweta Obere Aussiedoodle ma ọ bụrụ na obere udiri anumanu dabara gị fancy.
Izute Mochi, Australian Cattle Dog Corgi mix - Isi ihe onyonyo
A maara dị ka Nwa ehi Corgi , a crossbreed bụ nnọọ ezigbo mma-na spunky. Cheta njirimara Heeler jikọtara ya na obere Corgi ụkwụ. Di na Nwunye na ihe nkpuchi Corgi, ma i nwere otutu onu ahia nwere oke mmadu!
Izute Dax, Australian Cattle Dog Border Collie mix - Isi ihe onyonyo
Oke Ala aburula ndi nzuzu na uwa. Uche ha tinyere agụụ nke Blue Heeler? Ọ bụrụ na ị nọ n'ahịa maka oke nkịta na-azụ atụrụ na ọgụgụ isi kachasị elu, elela anya karịa Ókè-ala Heeler .
Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia Ọzụzụ Atụrụ German
Zute Mila, onye Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia Ọzụzụ Atụrụ German - Isi ihe onyonyo
A makwaara dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia ma ọ bụ German Aussie , a crossbreed mara ezigbo mma ma dị ike. Pụrụ ịdabere na German Shepherd Australian mix n’ọrụ ọ bụla, n’ọrụ, ma ọ bụ n’egwuregwu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịnwe onyinyo canine abụghị nsogbu, nke a nwere ike ịbụ ezigbo enyi gị.
Zute Bomber, onye Ọzụzụ Atụrụ Australia nke Blue Heeler mix - Isi ihe onyonyo
Texas Heelers bụ nkịta na-arụ ọrụ dị mkpa . N'adaghị ike ma nwee obi ike, nke a na-eme ka ịzụ atụrụ dị mfe.
Nkịta nwere ụdị ikike a kachasị mma n’aka onye nwe ya nwere ahụmahụ. Ndị Ugwu Blue Australia nwee ọganiihu, ndị isi na-arụsi ọrụ ike!
Chee na onye nwe ya nwere ike ịbụ gị? Gwa anyị na nkwupụta kpatara gị na Texas Heeler ji bụrụ egwuregwu zuru oke!
The Complete Victorian Bulldog Breed Information & Ntuziaka nke Onye Na-azụ
Nkịta Tamaskan: Eziokwu asaa na-akpali mmasị banyere Wolfdog a
ihe mix ụdị bụ nkịta m
ole ụdị ọnyà dị
ogologo ntutu isi ojii na tan chihuahua
aha mara mma maka obere nkịta nwoke
aha nkịta nwoke buru ibu